Indlu esemaphandleni emangalisayo emahlathini kunye NE-SPA YASESWEDEN - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni emangalisayo emahlathini kunye NE-SPA YASESWEDEN
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguCyril Et Alexandra
UCyril Et Alexandra yi-Superhost
Indlu esemaphandleni enomoya otyhefayo enendawo yokuhlamba amanzi ashushu yaseSweden, elungele impela-veki yothando njengentsapho, yabantu abayi-4, nayiphi na into ethe zava, phakathi kweoveni ezinkulu. Ibhafu enamanzi ashushu ephandle yeyabucala. Zikhona izinto zebhedi nezokuhlamba ZE-SPA
Indawo yokuhlala ikufutshane nabanikazi bezindlu. Ayinamdla, iyakuvuyela ukuzimela kwaye ilungele ukuphumla nokuphumla.
INDAWO yokumasajela efumaneka unyaka wonke, ifudunyezwe ngamaplanga.
Kufuphi neGaillac, iAlbi neMontauban, yindawo entle yokubona ummandla wethu omhle. Umhlaba weehektare eziliqela ezinamaplanga nee-oveni, namakhowa...
Amagumbi okulala ayi-2 (elinye elinebhedi eyi-160cm nenye, uhlobo lwe-mezzanine, kunye neebhedi ezimbini ze-1cm), igumbi lokuhlambela, umatshini wokuhlamba impahla, i-WC eyahlukileyo, iifestile ezinkulu, ikhitshi elinento yonke, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, indawo yokupaka yabucala. I-intanethi, i-Wi-Fi, i-TV ekwigumbi lokuhlala nakwigumbi lokulala, i-plancha nendawo yokoja ngaphandle.
Indawo enkulu yokonwaba (ipuli enamanzi ashushu ukususela ngoAprili ukuya ngo-Oktobha) eseMonclar de Quercy (enazo zonke iindawo zorhwebo) ikumgama weekhilomitha eziyi-4 ukusuka kwindlu esemaphandleni.
Uza kukwazi ukutyelela iilali ezininzi ezahlukahlukeneyo kuquka iCordes (ilali entle ngakumbi yaseFransi ngo-2014) iBruniquel, iPuycelsi, iSaint-Antonin, iPenne, iSaint Cirq Lapopie, kodwa nakwisixeko saseAlbi), Izidiliya zaseGaillac, neMontauban.
Ukuba uyayithanda imidlalo, ungaya kwiindonga zaseAveyron (phakathi kweSaint-Antonin nePenne), kodwa usebenzise neendlela ezininzi zokunyuka intaba ezikufutshane (iFêt de Grésigne).
Ezinye izinto ezininzi ezenziwayo kunye nezinto zolonwabo (iziko le-equestrian, "i- des bastides" ngesithuthuthu okanye iimoto, njl.) ziyafumaneka, siya kukwazi ukukwazisa.
Abavelisi beemveliso zasekuhlaleni bakwiindawo ezikufutshane, kodwa nakwiimarike ezidumileyo zasekuhlaleni, ezifana neSt Antoninreon Val, okanye iCaussade zikulindile.
Abanikazi bahlala kwindlu esecaleni kwendlu esemaphandleni, engakhange ihoywe.
Imigama ethile: Gaillac 25kms, Montauban 25 kms, Albi 45 kms, Toulouse 50 kms.
Ngoko ungoyiki, siza kukwamkela ngokonwaba kakhulu.
Hlala kamnandi !
4.98 · Izimvo eziyi-108
Umbuki zindwendwe ngu- Cyril Et Alexandra
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Montdurausse